जनरल भूपालमानसिंह कार्की « LiveMandu
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १२:१२
जनरल भूपालमानसिंह कार्की पौरखी पुरुष थिए । जनरल मातृकाप्रसाद कोइरालाको भनाइमा ‘जनरल कार्कीको मिहिनेत, त्याग र तपस्याले उनी एउटा सामान्य खरदारबाट क्रमशः उठ्तै लप्टन, बडाहाकिम, काठमाडौं उपत्याञ्चलको कमिश्नर, मन्त्री र राजसभा स्थायी समितिको सभापतिसम्मको आसनमा पुगे ।’ त्यस बेलाको राजसभामा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश पनि पदेन सदस्य हुन्थे । उनी आठ वर्षसम्म राजसभाको सम्माननीय सभापति भए । राजनीति उनको पेसा थिएन तर राजनीतिले पनि उनलाई छाडेन । किनभने उनी इमान्दार थिए, शिष्ट थिए र नैतिक थिए ।
जनरल कार्की मन्त्री पनि भए । २०१४ सालमा डा. केआई सिंहको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा उनी मन्त्री भएका थिए । त्यसबेला उनले नै पश्चिम नेपालतिर राजा महेन्द्रको सवारी चलाएका थिए । त्यसै बेलाको घटना हो– राजाले टेकेको भूइँ छाम्दै जनताले राजाले कुल्चेको धुलोको टीका लगाएका थिए । नेपाली परिवेशमा यो बेहोरा अचम्मैले फैलियो । राणाकालीन युग र त्यसपछि प्राप्त प्रजातन्त्रबाट दुखित भएका नेपाली जनताले त्यस बेला राजाको महत्व राम्ररी बुझेका थिए ।
जनरल कार्की मन्त्री भएकै समयको कुरा हो; त्यसै फेरोमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि शिक्षा मन्त्री भएका थिए । त्यसैघडी देवकोटा र कार्की मिलेर कीर्तिपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहनु पर्छ भन्ने माग राखेका थिए । अनि त्यस ठाउँमा कार्कीकै नेतृत्वमा झन्नै पाँच हजार रोपनी जग्गा जग्गा अधिकरण भयो । त्यसपछि कार्कीलाई राजा महेन्द्रले झनै काखी च्याप्न थाले । त्यसैल २०१५ सालमा पनि सुवर्णशमशेरको अध्यक्षताको मन्त्रीपरिषदमा उनी फेरि मन्त्री भए । त्यसबेला पनि उनले राष्ट्रनिर्माणको महायज्ञमा आफूलाई मन, वचन र कर्मले समाहित गरे ।
भूपालमानसिंह कार्की ९५ वर्ष बाँचे । उनले नेपाली पृष्ठभूमिमा झन्डै ८५ वर्ष अटुट सेवा गरे । उनले नेपालको राजनैतिक, प्रशासनिक र सामाजिसेवामा बराबरी ख्याति आर्जन गरे । खासगरेर पूर्वाञ्चलका दर्जनौ बाटो, पुल, मठमन्दिर र स्कुलमा यिनको तन, मन र धनले जरा गाडेको थियो ।
कार्कीसँग सधैं नजिक हुनेमध्ये मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला र कीर्तिनिधि विष्ट थिए । वीपी कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला कार्कीलाई काम गर्न सजिलो पारे । कतिसम्म भने केही पर्‍यो भने लेखेर काम चलाउनु भनेर बीपीले आफ्नो प्याडमा हस्ताक्षर गरेका खाली पाना पनि कार्कीलाई दिन्थे । त्यसैगरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि कार्कीलाई ‘भरिएको घडा’ भन्थे । साथै मातृकाप्रसाद कोइराला भन्थे ‘भूपालमानभन्दा इमान्दार, हिम्मतिलो र ठूलो भावना भएको नेपाली मैले भेटेकै थिएन ।’ त्यसैगरेर उनीबारे कीर्तिनिधि विष्टले ‘कार्की देशभक्त, इमान्दार र विकासवादी इतिहास पुरुष’ भनिरहन्थे ।
कार्की नेपाली परिवेशमा एउटा श्रद्धेय थिए । त्यसैले राजा त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रले पनि उनलाई धेरै नजिक राखे । नेपालमा प्रजातन्त्र आउने वितिक्कै मानार्थ सैनिक मानपदवी पाउने पनि उनी नै प्रथम नेपाली थिए । उनी वृगेडियर जनरलसम्म भए ।
बडाकप्तान हस्तवीरसिंह कार्कीका नाति, कप्तान केशरसिंह कार्की तथा खड्ककुमारी कार्कीका सुपुत्रका रूपमा जनरल भूपालमानसिंह कार्कीको जन्म १९६६ असोज ८ गते काठमाडौंमा भएको थियो । केशरसिंह, खड्ककुमारीका २२ जना सन्तानमध्ये २१ जना नै अल्पायु भए । उनी १४ वर्ष हुँदासम्म यी बाहेक यिनका सबै दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूको निधन भैसकेको थियो । त्यसपछि यिनको संरक्षण यिनकी कान्छी काकी भक्तकुमारी कार्कीबाट भएको थियो ।
कार्की सानैदेखि समाजसेवामा समर्पित थिए । १९८० सालमा घोपा फुस्रेमा हैंजाबाट धेरै मान्छे मरे । हैंजाका लास उठाउनेलाई पनि हैंजाले लाने गथ्र्या । त्यस बेला यी १५ बर्षका थिए । त्यतिखेरै यिनका अगुवा समाजसेवी जगतबहादुर कटुवाललाई पनि हैंजाले लग्यो । तर कार्की मृत्युदेखि डराएनन् । वास्तवमा त्यो भयाभय स्थितिलाई उनले छाडेर जान सकेनन् । नडराई यिनले धेरै लास खाडलमा पुरे । साथै १९९० सालको महाभूकम्पमा पनि यिनले जनधनको सुरक्षामा आपूmलाई समाहित गरे ।
कार्कीको जीवनमा टाँस्सिएको प्रिय नाउँ थियोे– कर्णेल शिवप्रतापशमशेर थापा । यिनले थापाकै अनेक गुण सिके । यिनै थापाले यिनलाई जागिरमा पनि खुट्टा टेकाए । कार्कीले पनि थापालाई पितृतुल्य माने । थापाकै निर्देशनले कार्की भीमशमशेरको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भारत गएर नेपाली फर्काएर ल्याउने काममा जुटे । फर्केर आउने ती नेपालीलाई जङ्गल फाँडेर बसोवास गर्न भीमशमशेरले हुकुम दिएका थिए ।
जनरल कार्कीले हिरण्य, हेमकुमारी, दुर्गाकुमारी, भूमासमेत चार जनासँग बिहे गरे । पत्नीहरूको क्रमशः निधन भएपछि उनी लगन गाँठो कस्तै जान्थे । साथै यिनका ४ छोरी र ४ जना छोरा जन्मे । यिनका जेठा छोरा जगतबन्धु कार्की समाजसेवामा लागे । जनरल कार्कीले स्थापना गरेको मेची क्याम्पसमा यिनले संस्थापनाकालमा प्रिन्सिपल हुनुका साथै निशुल्क चार वर्ष पढाएर छाडे । जनरल कार्कीले स्थापना गरेको झापाको पद्म पब्लिक हाईस्कुलमा पनि जगतबन्धुले अवैतनिक सेवा गरे । माइला लोकबन्धु कार्की झापा जिल्ला पञ्चायतको सभापति भए । लोकबन्धुले चित्रकारितामा पनि आफूलाई डो¥याए । साइँला लोकमानसिंह कार्की नेपाल सरकारको सचिव, मुख्य सचिव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त भए । उनी अख्तियार प्रमुख भएका बेला भ्रष्टाचारका विरुद्ध एउटा ठूलै जागरण आएको थियो । नेपालको राजनीति र प्रशासनको इतिहासमा त्यस प्रकारको कम्पन त्यसअघि कहिले पनि थिएन । जनरल कार्कीका कान्छा छोरा डा.बालमानसिंह कार्की वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष भए । साथै उनी किस्ट मेडिकल कलेजका पनि प्रिन्सिपल भए ।
कार्की राणाकालीन युगमा झापामा लप्टन भए । उनले त्यहाँ गाउँगाउँमा बाटो बनाए, पुलहरू पनि बनाए । एक वर्ष बस्ता उनले त्यहाँ ४४ वटा पुल बनाएका थिए । त्यसबेला स्थानीय राजवंशी नारीहरूका कम्मर माथि कपडाले छोप्ने यिनैले चलन बसाए । यिनले मेची र कोसीमा प्राथमिक, मिडिल र हाइस्कुलहरूको स्थापना गरे ।
राणाका लप्टन भए तापनि कार्की झापामा भित्रभित्रै प्रजातन्त्र ल्याउने काममा सरिक थिए । कृष्णप्रसाद कोइरालाको प्रेरणाले उनी यस बाटोमा हिंडे । नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले उनलाई झापा जिल्लाको काङ्ग्रेस सभापतिमा मनोनीत गरेको थियो । त्यसैबेला नेपाल सरकारले उनलाई पूर्वाञ्चल हेर्ने मोरङको बडाहाकिम पनि नियुक्त गरेको थियो ।
जनरल कार्कीले आगलागीबाट ध्वस्त भएको दुहवीबजारको पुनः निर्माण गरे । यिनले मातृकाप्रसाद कोइराला र तोलाराम दुगडसँग मिलेर विराटनगरमा वीरेन्द्र सभागृह बनाए । विराटनगरको आदर्श विद्यालय स्थापना गर्न पनि उनकै पाश्र्व भूमिका थियो ।
जनरल कार्की आर्थिक रुपमा पनि अति सम्पन्न थिए । मेची र कोशी अञ्चलमा उनको पैत्रिक सम्पत्ति मात्र ४२१ विघा जग्गा थियो । साथै उनले पनि झन्नै त्यति नै जग्गा जोडेर उनी ८ सय बिघाका भूमालिक भए । उनले पूर्वाञ्चलका शिक्षण संस्थाहरूलाई जग्गा, पैसा दिएर अडिलो बनाए ।
कार्कीलाई मठ मन्दिर, स्कुल, बाटोपुल बनाउने सारै सौख थियो । त्यसैले उनी यसैमा दत्तचित्त भएर लाग्थे । उनी उपत्यकाञ्चलको कमिश्नर भएका बेला ललितपुर जिल्लाका मेजिस्टेट बद्रीप्रसाद थपलियासँगको मद्दतमा टीकाभैरवबाट हेटौंडा जाने बाटो उनैले खनाए ।
कार्की पशुपति सुधार विकास समितिको सभापति पनि भए । त्यहाँ उनले तिरुपतिको शैलीमा पशुपतिनाथ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याउने अठोट गरे । तर उनको त्यस कामको विपरित मूलभट्ट लागे । त्यसपछि उनले राजीनामा दिए ।
कार्कीले भारतका विभिन्न मठमन्दिर र धर्मशालाहरूमा पनि आर्थिक सहयोग गरे । यिनैले करडौं रुपियाँ राशि खर्चेर विराटनगरमा अतिरुद्र याग नाउँको पुराण लगाए । त्यसभन्दाअघि पनि उनैले महारुद्र यज्ञ समेत गरे ।
जनरल कार्कीले एक करोड रूपियाँ राशिको भूपालमानसिंह कार्की प्रज्ञापरिषदको स्थापना गरे । नइ प्रकाशनको स्थापनामा पनि यिनैको पाश्र्व भूमिका थियो । साथै त्रिमूर्ति निकेतनको निर्माणमा समेत उनको पनि आर्थिक सहयोग थियो । नइ प्रकाशनले आफ्ना संस्थापक कार्की र उनकी साइँली पत्नी दुर्गाकुमारीको स्मृतिमा ‘नइ भूपालदुर्गा पुरस्कार’को स्थापना गरेको छ । ताम्रपत्र सहित एक लाख रूपियाँ राशिको यो पुरस्कार हरेक वर्ष राष्ट्रका एक जना सुप्रसिद्ध व्यक्तित्वलाई समर्पण गरिन्छ ।
कार्कीले नेपालका १४ अञ्चल अनि एशिया, युरोप र अमेरिकाका विभिन्न भूभाग घुमे ।
जनरल कार्कीले दुई कृति लेखे, ‘सवाल जवाफ’ र ‘मेरो जीवनयात्रा’ । साथै उनको सम्मानमा नइले ‘पौरखी पुरुष’ र नेपाली भाषाका ५२ जना कविद्वारा रचित शास्त्रीय छन्दमा ‘भूपाल अर्चना’ प्रकाशनमा ल्यायो । उनको जीवनभरिको योगदानको कदरस्वरुप नेपाल राष्ट्रका विभिन्न साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक संस्थाहरूबाट उनलाई छुट्टाछुट्टै गरेर झन्नै पाँच सय ओटा अभिनन्दनपत्र प्रदान गरिएको थियो । उनी ओमराम पट्ट, ज्योर्तिमय सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट, सुप्रसिद्ध गोरखादक्षिण्बाहु लगायत देशविदेशका थुप्रै अलङ्कारबाट विभूषित थिए ।
नेपाली धरामा आफुलाई समाहित गरिरहेका अवस्थामा देशभक्त जनरल कार्की २०६० साल माघ १ गते काठमाडौंमा स्वर्गीय भए ।
#डा. केआई सिंह
#नइ भूपालदुर्गा पुरस्कार
#पशुपति सुधार विकास समिति
#बडाकप्तान हस्तवीरसिंह कार्की